VACANCIES ( နေရာလွတ်များ ): February 2008
ကံ့ကော်ပင်ကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး …
ခပ်စောင်းစောင်းပဲ မတ်တတ်ရပ်တယ် …
ငါ့ ဘ၀ မှာလဲ
ပိတောက် က တခမ်းတနား ပြောပြတယ် …
အဲဒီ ကတည်းက …
သင်္ကြန်စာ မဖတ်ဘူး …
သင်္ကြန်ကဗျာ မရေးဘူး …
အရိပ်ကောင်းကောင်း သစ်ပင်တစ်ပင် …
မသိုးထမင်း မသိုးဟင်း …
စာရွက်လွတ် အတော်များများ …
မှင်ချောင်း အပိုပါတဲ့ ဘောလ်ပင် …
ဒီ့ အပြင် …
ငါ့အတွက် ဘာမှမလိုအပ်ပါ …
“ အချစ် ” က
စစ်တုရင်ခုံပေါ်က “ ရထား ” နဲ့တူတယ် …
“ မေတ္တာ ” ကတော့
“ ဘုရင်မ ” နဲ့ တူလေရဲ့ …
တစ်ခြားဘာမှ မပိုခဲ့ဘူး … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:25 AM 14 ထင်မြင်ချက်
တံခါးပေါင်းများစွာ ဖွင့်ဝင်လာခဲ့ရ … …
တစ်ချို့ တံခါးရဲ့ ဟိုဘက်မှာ …
အရသာခါးတဲ့ အမှန်တရားတွေကို တွေ့တယ် …
တစ်ချို့တံခါးရဲ့ ဟိုဘက်မှာတော့ …
ဒိုင်အိုဂျီးနီးစ် ရဲ့ ဖန်မီးအိမ်ကို တွေ့တယ် …
သံတူကြောင်းကွဲ မေတ္တာတရားတွေကိုတွေ့တယ် …
တစ်ချို့ တံခါးရဲ့ ဟိုဘက်မှာတော့ …
ပေါ်လီယာနာရဲ့ ဖိနပ်တစ်ဖက်ကို တွေ့တယ် …
သိုးဆောင်း ပြက္ခဒိန်စာရွက်အလွတ်တွေကို တွေ့တယ် …
စတီဗင်ဟောကင်းရဲ့ ၀ီးလ်ချဲဟောင်းကို တွေ့တယ် …
မကြာခင်မှာ ထပ်ဖွင့်ရအုံးမယ် …
အဲဒီတံခါးရဲ့ ဟိုဘက်မှာတော့ …
ငါ့ ကိုယ် ငါ ပဲ တွေ့ချင်တယ် … …
မကြာခင်မှာ အသက်ကတစ်နှစ်ကြီးတော့မယ့်အကြောင်းတွေးမိရင်း ဒီကဗျာကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ …
ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုတာ သေချာပေမယ့် လူလားမြောက် ဖို့တော့ ကြိုးစားသင်ယူနေဆဲပါပဲ … အရွယ်ရောက်ခြင်းဟာ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုင်ပြီး လူလားမြောက်ခြင်းကတော့ အသိဥာဏ်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ် …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 12:09 PM5ထင်မြင်ချက်
တစ်ညထဲ နှစ်ခါပြန်မက်တယ် …
သားကြောက်တာပေါ့ အမေရယ် … …
လူငယ်တွေက လိုက်နင်းကြတယ် …
တစ်ချို့လူတွေ ထောင်လွှားကြတယ် …
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် “ တေ့ ” ပစ်နေကြတယ် …
ကန်တော့ပွဲ ၊ ရာဇမတ်ကာနဲ့
သားတစ်စု သိုက်တူးနေကြတယ် …
ကြောက်လာလို့ သား ထွက်ပြေးတော့ …
မြေခွေးတွေက လမ်းပြကြတယ် …
ရန်သူမျိုး ငါးပါးက ပူးပေါင်းဖို့ခေါ်တယ် …
သူခိုးကတော့ သားကိုပြန်ပြီး ဓါးရိုးကမ်းတယ် အမေ … …
လှည့်ပတ်ပြေးနိုင်တဲ့ ကောင်ပါ အမေရယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 12:35 AM 11 ထင်မြင်ချက်
ခေါင်း နဲ့ ပန်း
ကွဲပျက်နေတဲ့မြို့ပြ … …
မာကျူရီ အလင်းက နှိုင်းရ …
ပျော့တွဲတွဲ ပလက်ဖောင်းက နှိုင်းရ …
ကားရောင်စုံက နှိုင်းရ …
ရွှေအိုရောင် ငွေအိုရောင်က နှိုင်းရ …
မြို့နေလူထုရဲ့ ပွယောင်းယောင်းမျက်နှာအရေပြားက နှိုင်းရ …
… … … နှိုင်းရ …
ကောင်းကင်နဲ့ မြေပြင်သာ မြို့ပြရဲ့ ပကတိဖြစ်တယ် … …
မေတ္တာ ခြုံလွှာ ပါးလျလာတဲ့ မြို့ပြဟာ
ည ည ကျမှ မျက်နှာသစ်ရတယ် …
အတိတ်ရဲ့ ရွှေတခေတ်ကို လွမ်းရတယ် …
မြွေပွေး ခါးပိုက်ရပြန်တယ် … …
၀တ်ကောင်းစားလှ မြို့ကြီးသားအပေါင်းတို့က …
မြို့ပြရဲ့ နေ့ညတွေမှာ လျှပ်ပေါ်လော်လီ ကြတယ် …
မြို့ပြရဲ့ အလှမှာ အရိပ်နေပြီး အခက်ချိုးကြတယ် …
မြို့ပြရဲ့ ရင်ခွင်မှာ ငါးပါးသီလကို ကင်းနိုင်သမျှကင်းကြတယ် … …
အုန်းမောင်းခေါက်သံနဲ့ အာရုဏ်တက်ချင်တဲ့ မြို့ပြ …
ယဉ်ကျေးမှုကို နေလိုလင်းစေချင်တဲ့ မြို့ပြ …
လူတွေကို သဘာဝဆန်ဆန်လှစေချင်တဲ့ မြို့ပြ …
မြို့ပြကိုယ်တိုင်က နှိုင်းရ …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 12:32 AM0ထင်မြင်ချက်
ရင်ဘတ်တစ်ခြမ်းနဲ့ စုံလုံး ကန်းနေလိမ့်မယ်လို့
ဘယ်တွေးခဲ့ မိမလဲ … …
မချွန်မြခဲ့ပါဘူး … …
တဖြည်းဖြည်း မဝေးပါရစေနဲ့ …
အိပ်ရာထဲက ပြန်တွေ့ခဲ့တာပါ … …
ချစ်ခြင်းမေတ္တာလဲ ပါလေရဲ့ … …
တမျှော်တခေါ် … ဝေး … ကြ …
ငါ့ ကဗျာတွေက အရိပ်မထွက်တော့ရှာဘူး … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 10:46 AM2ထင်မြင်ချက်
ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော် အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ် … သူများတွေလို BD ကိတ်တွေနဲ့တော့ ဧည့်မခံတော့ပါဘူး … ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို မျှဝေခံစားစေချင်ပါတယ် ... ချစ်ဦးသူဆိုတာ တစ်ဘ၀မှာတော့ သေရာပါမယ့် အမှတ်တစ်ခုပါပဲ …
… ဘ၀မှာ အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ပါစေ …
… တောင့်တခြင်းကင်းပါစေ …
… တည်ငြိမ်အေးချမ်းပါစေ …
…. သာစေချင်သော လမင်းလေး အမြန်ဆုံးသာပါစေ …
….. ဘ၀မှာ … ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေပဲ ပြီးပြည့်စုံပါစေ … ….
လီဂန် ( Tale )
လသာတဲ့ ညက …
လမင်းကို မျက်ရည်တွေနဲ့ ကြည့်ဖြစ်တယ် ..
သူမ ကတော့ ဝေေ၀၀ါးဝါး တွေကြားက …
… လှ … လို့ …
ကျွန်တော်ကလဲ တမ်းတယ် …
ခုနှစ်စဉ်ကြယ်လဲ လှချင်လှလိမ့်မယ် …
ဓူုဝံကြယ်လဲ လှချင်လှလိမ့်မယ် ….
သူမ ကတော့ လှတာ သေချာတယ် … …
ထမင်းဆီဆမ်း ရွှေလင်ပန်းကို မွတ်သိပ်တဲ့သူ …
သူ့ကိုယ်သူ ခြုံလွှာတစ်စနဲ့ ကာတယ် … …
အမှောင်တွေကို ကြောက်တဲ့သူ …
ခြုံလွှာတွေ တလက်လက်နဲ့ ပြေကျ …
လ , အလင်းနဲ့ လှချင်သူ …. …
ကျွန်တော် ချစ်ရတဲ့ကောင်မလေးတယောက် ကိုခံစားပြီးဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ ရင်မှလာသောစားသားဆိုရင် မငြင်းပါဘူး။ချစ်ရတယ်ဆိုတာထက် မြတ်နိုးရတယ်ဆိုရင်ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ကဗျာဆိုတာ ရင်တွင်းကခံစားချက်ကို ဖွင့်ထုတ်ခံစားမှုလို့ ကျွန်တော်ယူဆတယ် ။ခံစားမှုဆိုတာကလည်းထပ်တူကျချင်မှကျမှာပါ။ခံစားချက်ခြင်းထပ်တူကျတဲ့ကဗျာဖတ် ပရိတ်သတ်တွေအတွတ် ကဗျာ ရသ တခုခုကိုပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်…… ……
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 4:52 AM5ထင်မြင်ချက်
လွမ်း ( ၂ )
၀င် မ သွားတာက ခက်တယ် … …
အဲဒီလိုပဲ ခေါက်ရိုးကျိုးခဲ့ … …
ဘာဆိုဘာမှ မကြောက်တဲ့သူ … …
မြင်ဖူးရုံနဲ့ လွမ်းတာမဟုတ်ခဲ့ဘူး …
ချစ်ဦးသူပဲ ပြောပါတော့ …
ရပ်တန့်ပြနေအုံးမှာ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 3:09 AM4ထင်မြင်ချက်
အပြာရောင် အိပ်မက်လေး ကတော့
သူမ စိတ်ဆိုးရတာ အခါခါ
ဟောင်းမြဲ … ဟောင်းဆဲပဲ … …
ကိုယ့် အနံ … ကိုယ့်အလျားနဲ့ ကိုယ် …
ပိန်ပြီး ဟောင်းနွမ်းလို့ … …
ကျက်စားလို့ … …
ငါ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုကို
ခွင့်လွှတ်ပါ … …
စောင့်အုံမယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:01 AM4ထင်မြင်ချက်
ချစ်သူများနေ့ ကစားပွဲ အမှတ်တရ
ဘလော့ရပ်ကွက်ထဲမှာ အတူတကွ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ပိုမို ရင်းနှီးနွေးထွေးစေတဲ့ ကိုသားဖြိုးရဲ့ ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရကစားပွဲလေးကတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ …
ကစားပွဲလေးအတွက် ညီအစ်ကိုမောင်နှများရဲ့ စုပေါင်း အကဲဖြတ်ပေးမှုနဲ့
ကျွန်တော် ၊ ကိုဆိုးသွမ်း နဲ့ မပန်းခရေ တို့က ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကဗျာတစ်ပုဒ်စီ တောင်းဆိုခွင့်ရကြပါတယ် … ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ချစ်ရသူလေးအတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် ( အသေးစိတ်သိချင်သူများ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် … ဟီး) … ကိုသားဖြိုးလက်ဆောင်ပေးသော ကဗျာလေးကို ပို့စ်အဖြစ်တင် အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ် …
ကျွန်တော် ချစ်ရသူလေး အတွက် အမှတ်တရဖြစ်ပါစေ …
တုန်ရီစွာ ပြောခဲ့တယ်။ မင်းကို ချစ်တယ် လို့
ပြန်မေးမိတယ်။ ချစ်ရဲ့လား လို့
ကြင်ယာဖက်သည် ငါဖြစ်၏ တဲ့။ ။
သိမ်ငယ်စိတ်လေး ၀င်နေပြီလားကွယ်။ ။
ရည်ရွယ်ထားသမျှ လုပ်ဆောင်လေ။ ။
တို့နှစ်ယောက်ကို ဆုံဆည်းပေးလိမ့်မယ်လေ။ ။
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 8:03 PM3ထင်မြင်ချက်
ပန်းရနံ့တွေနဲ့ မွှေးပျံ့စင်ကြယ်လို့ … …
လွယ်အိတ်ပြာလေးရဲ့ ခြူသံ …
ကျွန်တော့်ရဲ့ ခုံတန်းရှည်ကဗျာများ …
အဖြူအစိမ်းဝတ် “ အက်ဖရိုဒိုက် ” ကို
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်ခဲ့တယ် … …
ညတကာတို့ရဲ့ ကြယ်မလေး …
တိတ်တဆိတ် မှိတ်ပစ်တတ်တယ် … …
အလွမ်းနဲ့ နက္ခတ် တူခဲ့လေသလား …
ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်ပိတ်စာတွေလဲ ကြေမွ
“ အိမ်ရှေ့မရပ်ရ ” အမိန့်တော်မှာလဲ
အသေအချာ ရိုကျိုးခဲ့ပါတယ် … …
ကျမ်းတစ်စောင် ပေတစ်ဖွဲ့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး … …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထူမရတာ အခါခါ
မမှီတဲ့ ပန်းကိုနမ်းချင်တဲ့ တေလေလေး
မီးလင်းဖို နံဘေးမှာ အလွမ်းခြုံရင်း
လင်းအုံခဲ့ရပေါ့ … …
( “ အက်ဖရိုဒိုက် ” = အချစ် ၊ အလှ နတ်ဘုရားမ )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:29 AM3ထင်မြင်ချက်
( ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ )
ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ လို့ေ၀၀ါးနေတဲ့ ကျွန်တော့် ကို ကဗျာလွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ ခရီးသွားနေတဲ့ သားဖြိုးက မေးလ် တစ်စောင်ပို့လာပါတယ် …
ချစ်သူများနေ့မှာ ကစားပွဲလေးတစ်ခု လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းပါ … ကိုသားဖြိုးရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ ဒီလိုပါ … …..
mypoembag: ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ညမှာ ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် ဘလောဒ်ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမများ ပျော်ရွှင်စရာ ကစားပွဲလေးတစ်ခု ကျင်းပပါမယ်...
အဲဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်လဲ တတ်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလို မကြီးမငယ်နဲ့ ၀င်ကစားဖြစ်ပါတယ် … ကျွန်တော်က မေးခွန်းအားလုံးကို ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲနဲ့ပဲ ပြန်ဖြေထားပါတယ် …
ဆောင်းကိုခြွေဖို့ “ နေ ” ရောင်တွေ ချွန်မြကြ …
အဲဒီခဏ … အ “ ရာ ” ရာကလှတယ် …
ဆောင်းရေ … “ လွတ် ” အောင်ပြေးပါကွယ် …
မကြာခင် … ဖေဖော်ဝါရီက အားအင်ခပ် “ များ ” များနဲ့ လာတော့မယ် …
အသေအချာ “ တည် ” ရှိနေတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ …
ပန်းအိုးထဲက “ ငြိမ်း ” ချမ်းရေးနှင်းဆီ …
အပြာရောင်နဲ့ထုတ်ပိုးလို့ … ချစ်သူဆီ “ ကို ” လက်ဆောင်ပို့ချင်တယ် …
(၂) နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်စားရ
(၃) သုံးရာသီရဲ့ အလှဆုံးအနမ်းပွင့်လေးကိုပေါ့ …
(၅) ငါးတို့မကြားနိုင်သလိုမျိုး …
(၇) ခွန်အားကုန်နဲ့ အံတုနေတဲ့ လယ်စောင့်တဲလိုမျိုး …
(၉) ကိုးကွယ်ရာရှာနေရတဲ့ မျက်နှာမွဲပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်လိုမျိုး …
(၁၀) ဆယ်ယူခဲ့တဲ့ ကျောက်တုံးလေး …
လမ်းအိုလေးကို လွမ်းနေတယ် … …
မှာ မဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် …
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းပါတယ် … ပြီးတော့ ချစ်သူများနေ့ကို အမှတ်ရနေစေပါတယ် …. ခေါင်းစားခဲ့ရတာကလွဲရင် ကိုသားဖြိုးရဲ့ ကစားပွဲလေးကို ကြိုက်ပါတယ် … ကျွန်တော်သာဆုရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုသားဖြိုး အလှည့်ပေါ့ … ဟီးဟီး …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 9:52 AM2ထင်မြင်ချက်
ပြေးဝင်ပုန်းခိုရတဲ့ ည … …
ခပ်ဖွဖွလေး မ ရင်း
ဆင်ဖိုနီ အမှတ် ( ၉ ) ကို
သူမ က စိတ်ကူးနဲ့ ဆိုတယ် … …
တလက်လက် သတ်တယ် … …
အသက်ပြန်သွင်းတယ် … …
ဖြူလွှလွှ ကတ္တီပါစတွေ ဖြန့်ခင်း အားပေးကြ …
၀တ်ဆံရင်ဘတ်ကို တဗြန်းဗြန်းဖွင့်ပြီးအားပေးကြ …
မှေးစက်ခစားကြ … …
ကျွန်တော့်အိပ်မက်နဲ့ သူမ ကလဲ
လင်းလက် ကခုန်ကြ …
မွတ်သိပ်စွာဖွင့်ခဲ့မိသော ပန်ဒိုရာရဲ့ သေတ္တာ …
မျဉ်းပြိုင်တို့ကို ဆုံစေသော အမှတ် …
စိန့် ဗယ်လင်တိုင်းတီးသော နောက်ဆုံးခေါင်းလောင်းသံ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 7:40 PM2ထင်မြင်ချက်
လမ်းကြုံ လို့ လာနားတယ် … …
နား နားကို ဖြည်းဖြည်းချင်းကပ်ပြီး
နွေ နွေ ချင်းထပ်ရင် … မြင့်မြတ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ် … …
အသဲတံဆိပ်တွေ ကပ်လို့ … …
ကျွန်တော့် ရင်ခွင် ကိုင်းဖျားမှာ
ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံး … နားလို့ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 7:29 PM0ထင်မြင်ချက်
ငါ့ အိမ်လေးရဲ့ အကျယ်အ၀န်းကတော့
…. မှိုင်းဝေ အုံပြတယ် …
စစ်မောင်းသံတွေနဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
မြေမှုံမြေသင်းတို့နဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
သွေးစိမ်း ရွှင်ရွှင်နဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
… သင်းဝေလင်းချင်းတယ် …
အောင်ပွဲခံ ဗျပ်စောင်းသံတွေနဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
စမ်းချောင်းရေတို့နဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
လက်တစ်ဆုတ်စာ နံ့သာရနံ့တို့နဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
… ချွန်မြ လှပတယ် …
လူနဲ့ချက်တဲ့ ၀ိုင်အရက်တွေနဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
လက်ဖျစ်တစ်တွတ်စာဘ၀တွေနဲ့လဲ ယဉ်ပါးခဲ့ …
ထာဝရ ယဉ်ပါးနေသေးရဲ့ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 12:12 AM3ထင်မြင်ချက်
နှင်းဆီရိုးတံလေးတစ်ခုတွေ့တယ် … …
စုံတွဲသီချင်း တစ်ခြမ်းရတယ် …
သေချာလွန်းခဲ့ပြီ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 10:32 PM0ထင်မြင်ချက်
နောက်လိုက်တွေကို သော့မခတ်မိဘူး … …
ကြိုးလျော့ ချထားခဲ့ရတယ် … …
ရင်ဘတ်နဲ့ဆက်ပြီး ဖြတ်ခဲ့ရတယ် … …
ရင်မှာ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ဖြစ်လို့ … …
လျှောက်နေမိသူ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:11 AM 1 ထင်မြင်ချက်
ကျွန်တော် နေ့ ကို
ဂရုတစိုက်ထွက်ခဲ့တယ် … …
ပန်းတွေရှိတယ် … …
မုတ်သုံကို စောင့်တယ် … …
စာတွေမသင်ပဲ ကဗျာတွေသင်ပါ …
ပြီးရင် … သင့်နှလုံးသားကို
ကျွန်တော့် ဥယျာဉ်မှာထားပါ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 1:08 AM0ထင်မြင်ချက်
စပါးခင်းလေး လှလာတယ် … …
နွေးထွေးပါစေလားကွယ် … …
( အခုတလော … ကျွန်တော်ရင်းနှီးသော ဘလော့ဂါများ ယာယီ (သို့မဟုတ်) အပြီးအပိုင် အငြိမ်းစား ယူနေကြတာ ကြုံနေရပါတယ် … သူတို့မှာတော့ အကျိုးအကြောင်းရှိပေမယ့် ကျွန်တော့် အတွက်ကတော့ စိတ်မကောင်းမိတာအမှန်ပါ … ခင်မင်ဆုံဆည်းမယ်လို့ကြံခါရှိသေး … ဝေး တော့မဝေးချင်ပါ … ဒီအတွက် ကဗျာလေးစပ်မိပါတယ် … အားအင်တစ်မျိုးများ ပြန်ဖြစ်လာမလားပေါ့ … ကျွန်တော် တတ်နိုင်တာကတော့ ဒီလောက်လေးပဲရှိပါတယ် … ပြန်လာနိုင်ကြပါစေ … )
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 5:16 AM7ထင်မြင်ချက်
မျက်နှာဖုံးတစ်ထောင်နဲ့ ရွေ့လျားကြ …
တိုက်တာတွေက ဘိလပ်မြေကို ဆာလောင်ကြ
မော်တော်ယာဉ်တွေက လောင်စာကို ဆာလောင်ကြ
သူတို့ရဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကတော့ အိုင်အိုဒင်းဓါတ်ကို ဆာလောင်ကြ
ကြည့်စမ်းပါအုံး အမေရယ် …
သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ် အမှန်တရားလေး
… ကြာပေါ့ …
မာယာအဆင်းနဲ့ … လင်းလို့ …
ရင်ချင်းအပ်ရင်း ဝေးခဲ့တယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 5:44 PM2ထင်မြင်ချက်
တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုး မို့လို့သာပစ်လိုက်ရတယ်
တစ်ဘ၀လုံးကို မျှောပြီး ရက်လုပ်ခဲ့ရ … …
ငါ့ အရိပ်ပါပဲ … …
အတင်းအဓမ္မ ရောင့်ရဲ စရာမလို
အရင် သင်ကြားပါ … …
အရင်သင်ကြားပါ … …
စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေလို့ ချရေးမိတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပါ … မကောင်းမှန်းသိပေမယ့်
ရေးပြီးရင် မလွှင့်ပစ်ရက်တဲ့ ကျွန်တော့်အကျင့်ကြောင့် ပို့စ်အဖြစ်တင်လိုက်တာပါ …
ဒုက္ခခံပြီး ဖတ်ပေးကြပါအုံး …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:57 PM0ထင်မြင်ချက်
ကိုယ့်ရင်မှာ အဖျားသွေးရှိလာပြီ … …
တည့်တည့်လွဲတယ် … …
ဒီဖက်မှာ …လေပူတွေ ဝေ့ခတ်လာပြန်ပြီ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:25 PM 1 ထင်မြင်ချက်
မကြည့်ဖြစ်တာကြာပြီ … …
သံစဉ်တွေသေခဲ့ကြ … …
ငါ … ဘယ်လိုပုံစံနဲ့
ဟောင်းနွမ်းရ … ဟောင်းနွမ်းရ … …
တိမ်ဆူးတွေလဲ ဖူးကုန်ကြပြီ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 2:22 PM0ထင်မြင်ချက်
မရဏလက်တို့ရဲ့ အနုပညာပြကွက်ဖြစ်တယ် … …
အလင်းပြိုင်ကျရင် တို့ပိုင်တဲ့ ဆုံချက်တိုင်း
ကဗျာဟာ သက်မဲ့ဒြပ်မဲ့ ဗီတာမင်အပြည့်နဲ့ ခြံထွက်သီးနှံများဖြစ်ရဲ့ …
အလွမ်းတွေဝေလို့ အနမ်းတွေ သွေရတဲ့အထဲ
ငါတို့ ဓါတ်ပြုလိုက်ကြတယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 7:45 PM3ထင်မြင်ချက်
ကဗျာနဲ့ မိုးထားတဲ့ အိမ် … …
အဲဒီ အိမ်လေးထဲမှာရှိတယ် … …
ငါပြန်လာရင် ကဗျာနဲ့ ကြိုတဲ့
ငှက်ကျားအိုလေးလဲ ရှိတယ် … …
အရသာ သတ်သတ် သစ်သီးများ
ဧည့်ခန်းထဲက စားပွဲပေါ်မှာ ရှိတယ် … …
ပတ်ဝန်းကျင်မရှိဘူး … …
သစ်ပင်တွေမရှိဘူး … …
သိတဲ့လူမရှိဘူး … …
မရှိခဲ့ပါဘူး … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 9:06 PM5ထင်မြင်ချက်
ဓားမိုးပြီး မပြောကြနဲ့ … …
( ဒီတစ်သက် )
ငါ ဒူးထောက်လိမ့်မယ် မဟုတ်ပေဘူး … …
အသဲရောင်ပွင့်ဖတ်တွေကို ထိန်းပါ …
ကောင်းမြတ်ခြင်းကို မွမ်းမံပါ …
နီလွင်ရှင်းတောက်ခြင်းကို ပေးပါ …
သင့်မာယာတို့ကို သတ်ပါ … …
အဝေးကကြားနိုင်တဲ့ ရနံ့ခြေသံတို့ရေ …
ငါ့ မြို့ရိုးဆီ ခြေဦးမလှည့်နဲ့ …
ဒီတစ်ဆောင်းလောက် ခိုအုံးမယ် … …
သိထားပါသလား … ?
ဘယ်သူမှမလုပ်ကူနိုင်ဘူးဆိုတာ … …
( အခုပဲ )
သင်းရှကြပြီ … … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:59 PM 1 ထင်မြင်ချက်
လမင်းကို မထိတဲ့ ရင်မှာ
မိုးတွေ ရွှဲလို့ … …
ဒိုင်ရာရီမှာ ဆုတ်ပစ်လိုက်မယ် … …
ဒီတစ်ခါ လ ကွယ်ပြီးရင်တော့
ငါ့ရင်ကို ဟင်းလင်းဖွင့်ထားပါ့မယ် …
မင်းသနားစိတ်ထားပြီး … ရင်ပေါ်ကြွေမလားပေါ့ … …
ခေါင်းလေးပဲ ညိတ်ပြပါ … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:44 PM 1 ထင်မြင်ချက်
ဒီလိုနဲ့ … လမ်းခွဲခဲ့ကြ … …
မိုးစက်တွေကိုလွတ်အောင်ရှောင်တယ် … …
လေယူခပ်တိမ်းတိမ်းမှာ စကားစိမ်းဆိုကြ …
နှင်းမှုန်တွေနဲ့ လင်းအုံခဲ့ရ … …
“ ၇ ” ရက်မြောက် အိပ်မက်တွေပေမယ့်
ရောင်စုံဖူးစေချင်သူ … …
နဲနဲတော့ ကောက်မယ် … …
စာရေးသူ တည်ညိမ်းကို ( သို့မဟုတ် ) အချိန် 6:41 PM 1 ထင်မြင်ချက်
မျဉ်း ကံ့ကော်တစ်ပွင့်ကြွေဖို့ ကံ့ကော်ပင်ကို ကိုင်...
ခြေရာများရဲ့ သမိုင်း ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့ မျဉ်းဖြော...
နဂ္ဂတစ် အိပ်မက်တစ်ခုထဲကိုပဲ တစ်ညထဲ နှစ်ခါပြန်မက်တယ...
ခေါင်း နဲ့ ပန်း လားရာလေးဖက်မှာ သိပ်သိပ်သည်းသည်း ...
ဗလာ ဆောင်းရာဇ၀င်ထဲ မီးခင်းတဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ရင်ဘတ်တစ...
အမှတ်တရ ဒီနေ့ကတော့ ကျွန်တော် အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချ...
လွမ်း ( ၂ ) လေးထောင့်စပ်စပ် ပုံစံမျိုးထဲ ခန္ဓာတစ်ခ...
လွမ်း အပြာရောင် အိပ်မက်လေး ကတော့ မဟောင်းနွမ်းဘူး ...
ချစ်သူများနေ့ ကစားပွဲ အမှတ်တရ ဘလော့ရပ်ကွက်ထဲမှာ အ...
ကျောင်းပုံပြင် ကျောင်းတော်မှာ နေသာတိုင်း ခပ်မှိုင...
( ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ) ချစ်သူများနေ့မှာ ဘာလုပ်...
( ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ) ဆယ့်လေးယောက်မြောက် အိန...
( ချစ်သူများနေ့ အမှတ်တရ ) ဖေဖော်ဝါရီ လမ်းမှားလာ...
ဓါး ငါ့ အိမ်လေးရဲ့ အကျယ်အ၀န်းကတော့ …. မှိုင်းဝေ အံ...
တနယ်တကျေး ချစ်သူရှိတဲ့ အရပ်ကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ေ...
ပျံသန်းခဲ့မှုရဲ့ မာတိကာ ငါ့ မနက်ခင်းလေးပေါ့ အာရုံက...
အလင်းငွေ့ ရင်ခွင်ထဲလက်နဲ့ ဒီနေ့… ကျွန်တော် နေ့ ကိ...
လယ်သမား မြေလွတ်မြေရိုင်းကိုမှ ဆွဆွလာလိုက်တာ ထုံေ...
မှော်ရုံ သံချေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ လူတွေလေ နွေခေါင်ခေါ...
ဖတ်စာ တောင်းဆိုး ပလုံးဆိုး မို့လို့သာပစ်လိုက်ရတယ်...
စက်ရပ်သတင်း ခွဲခွာမှုက ရင်ကိုတဆစ်ဆစ် နေရာဒေသက မိုင...
မိုးစက်ရုပ်ကြွင်း မိုးပွင့်တွေ ထစ်ချုန်းရွာလို့ေ...
ဘယ်သူပြောလဲ … ကဗျာဆိုတာ မိုးကျရွှေကိုယ် ဘယ်သူပြောလ...
ရွာတစ်ရွာ ရွာတစ်ရွာ ငါ့ဘ၀ကိုက ကဗျာနဲ့ မိုးထားတ...
မီးပန်း မီးပန်း နှင်းဆီကို ရိုကျိုးဖို့ ငါ့ကို ဓ...
လရောင်ကို ငတ်မွတ်ခြင်း လရောင်ကို ငတ်မွတ်ခြင်း ခေ...
ပုံပြင်ဆန်တဲ့လူ ပုံပြင်ဆန်တဲ့လူ တစ်ရာသီနဲ့တစ်ရာသ...